အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက် Archives | Page 43 of 48 | Frontier Myanmar
တပ်မတော်က အစိုးရအဖွဲ့သစ်ကို ဘယ်လို သဘောထားသင့်သလဲ
ဒုသမ္မတ သုံးယောက် ရွေးချယ်ပြီးနောက် သမ္မတ အရည်အချင်း ပြည့်မီ မပြည့်မီ စိစစ်တဲ့ဆီမှာလည်း စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၇ ယောက်ရှိတဲ့အနက် တပ်မတော် အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်က အင်န်အယ်လ်ဒီ က တင်တဲ့ ဦးထင်ကျော်ကိုရော၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကိုပါ ထောက်ခံ မပေးခဲ့ပါဘူး။ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ အားလုံးသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်း.
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း၊ တရုတ်အတွက် ဘယ်လောက် အရေးကြီးနေသလဲ
မလိခ မြစ်ပေါ်မှာ ရေကာတာ တစ်ခု၊ မေခ မြစ်ပေါ်မှာ ရေကာတာ ငါးခု၊ မေခ၊ မလိခ မြစ်နှစ်သွယ် ပေါင်းဆုံရာ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာ တစ်ခု စုစုပေါင်း ရေကာတာ ခုနှစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ ထုတ်ယူဖို့ပါ။ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လောက် ပြင်ဆင်လို့ ပြီးပြီလဲ
နေပြည်တော်စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာတွင် မတ် ၁၀ ရက်နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား လာရောက်တွေ့ဆုံနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ဓာတ်ပုံ- အန်းဝမ် စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ မတ်လ ၁၀ ရက်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ စ ပြီး လုပ်ကိုင်ပါတော့မယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊.
အဂတိလိုက်စားမှု သံသယရှိစရာ အကောင်းဆုံး ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
ထူးထူးခြားခြား ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ West Corporation ဟာ အဲဒီ တင်ဒါခေါ်တဲ့ ရထားတွဲဆိုင်းတွေကို တင်ဒါ မခေါ်ခင် လ အနည်းငယ်ကတည်းက ပြည်ပကနေ ဝယ်ယူတင်သွင်းထားခဲ့ပြီး သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းကိုတောင် ရောက်နေပြီ ဆိုတာပါပဲ။ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်.